I-Liquid Silicone Molding - IXiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
I-Liquid silicone irabha iyisilicone ephezulu yokuhlanzeka ephulukisiwe i-silicone ene-compression ephansi, ukuqina okukhulu nokukwazi ukumelana namazinga okushisa okushisa nokubanda afanelekile ukukhiqizwa kwezingxenye, lapho kumele kube khona ikhwalithi ephezulu. Ngenxa yesimo sezinto ezifudumele, isikhunta se-silicone injing sidinga ukwelashwa okukhethekile, njengokuxuba okuxutshwe nalutho, ngenkathi kugcinwa lokho kumazinga okushisa aphansi ngaphambi kokuthi kufakwe emgodini oshubile futhi kugcwele amalangabi.
Izicelo ezijwayelekile zerabha le-silicone ewuketshezi ziyimikhiqizo edinga ukunemba okuphezulu okufana nokufakwa uphawu, uphawu lwensimbi, izixhumi zikagesi, izixhumi zezikhonkwane eziningi, imikhiqizo yezinsana lapho kufiswa khona indawo ebushelelezi, njengama-nipples, ukusetshenziswa kwezokwelapha kanye nezimpahla zasekhishini njengokubhaka. amapani, ama-spatulas, njll. Imvamisa, irabicic ye-silicone igcwele kakhulu kwezinye izingxenye ezenziwe ngamapulasitiki ahlukene. Isibonelo, ubuso benkinobho ye-silicone bungenziwa bunyakaziswa endlini eyi-6,6 yeNylon.
Ngamakhemikhali, irabicic ye-silicone ngumndeni wama-elmomers we-thermoset anomgogodla wokushintsha i-silicon nama-athomu we-oksijini namaqembu asemaceleni we-methyl noma i-vinyl. Ama-ruble e-Silicone akha cishe ama-30% omndeni we-silicone, ebenze babe yiqembu elikhulu lalowo mndeni. Ama-ruble e-Silicone agcina izakhiwo zawo zemishini phezu kwamazinga amaningi okushisa futhi ukuba khona kwamaqembu e-methyl kuma-rubic abicah kwenza ukuthi lezi zinto zokwakha zibe yi-hydrophobic kakhulu, zizenze zilungele ukufakwa komhlaba kagesi. 
Ukusebenzelana kwezinto eziphilayo: Ngaphansi kokuhlolwa okubanzi, irabha le-silicone ewuketshezi kukhombisile ukuhambisana okuhle ngezicubu zomuntu nezamanzi omzimba. Ngokuqhathanisa namanye ama-elastomers, i-LSR imelana nokukhula kwamagciwane futhi ngeke ichaze noma ilungise ezinye izinto. I-LSR nayo ayinambono futhi ayinaphunga futhi ingenziwa ukuze ihambisane nezidingo eziqinile ze-FDA. Lokhu okuqukethwe kungenziwa inzalo ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-steam autoclaving, ethylene oxide (ETO), i-gamma, i-e-beam namanye amasu amaningi, kuhlangana konke ukuvunyelwa okudingekayo njenge-BfR XV, FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI.
Ihlala isikhathi eside
Izingxenye ze-LSR zingamelana nokushisa okuphezulu, okubenza babe yisinqumo esifanele sezakhi ezingaphansi kwe-hood yezimoto futhi eduze nezinjini. Izingxenye ezenziwe nge-liquid silicone injing wokubumba injing yomlilo ziyabuya futhi ngeke zincibilike.
I-Liquid silicone irabha imelana namanzi, i-oxidation nezixazululo ezithile zamakhemikhali ezinjenge-asidi ne-alkali
Ukumelana kwezinga lokushisa
Uma kuqhathaniswa namanye ama-elastomers, ama-silicone angakwazi ukubekezelela ukwehluka okubanzi okuphezulu / okuphansi kakhulu.
I-LSR ine-elongation enhle, ukuklebhula okuphezulu namandla ashubile, ukuguquguquka okungcono kakhulu kanye nobubanzi bohlobo lwe-5 kuya ku-80 Shore A.
I-LSR inezindawo ezinhle kakhulu zokufakelwa, ezinikeza inketho ekhangayo yomgcini wezinhlelo zokusebenza zikagesi. Uma kuqhathaniswa nezinto ezivamile zokufaka insulating, i-silicone ingasebenza emazingeni okushisa aphakeme kakhulu naphansi.
Ukusobala kanye nokugcotshwa kwamabala
I-LSR inayo ukubukeka kwemvelo, le mfanelo yenza sikwazi ukukhiqiza, imibala enemibala, inkambiso, imikhiqizo ebunjiwe
Ukuqina kwebhetri (impahla elungele ukusetshenziswa)
Umjovo oqondile (akukho doti)
Isikhathi somjikelezo omfishane
Ubuchwepheshe be-'Flashless '(abekho abapheki)
Izinhlelo zokuzenzisa ezizenzakalelayo